Iyoba njani iplanethi yethu eminyakeni eyizigidi ezingama-250? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokusho kombono wePlate Tectonics, ishelufu lezwekazi leplanethi yethu lihlukaniswe ngamapuleti ahamba ngokuqhubekayo, ngenxa yemisinga ye-convection yengubo yoMhlaba. Ukuhamba okuqhubekayo kwamazwekazi kuzodala ukuthi kungakapheli iminyaka eyizigidi ezingama-250, iplanethi yethu ayibukeki ngendlela efanayo nanamuhla.
Izigidi zeminyaka eyedlule, lapho kwakhiwa izilwandle namazwekazi, kwakukhona eyodwa kuphela, iPangea. Kuze kube namuhla, ukunyakaza amapuleti anakho ukwehlukanisa amazwekazi, ngakho-ke kuzofika isikhathi lapho, ngemuva kokuhlukaniswa okungaka, beyojoyina futhi. Iyoba njani iplanethi yethu eminyakeni eyizigidi ezingama-250?
IBusiness Insider ihlele ukugqwayiza, isebenzisa ukuqagela okuvela kusolwazi owengeziwe UChristopher Scotese waseNorthwestern University, ukucabanga ngomhlaba izigidi zeminyaka esikhathini esizayo. Futhi kubukeka njengendawo ehluke kakhulu. Kungenzeka ukuthi, ngemuva kokushintshwa okuqhubekayo kwamapuleti, kuzofika isikhathi lapho amazwekazi ephinde ahlangana khona kanye nokwakhiwa kwezwekazi elikhulu.
Cabanga ngomhlaba ongenamazwekazi noma imingcele. Wonke amazwe omhlaba abengaphila engxenyeni efanayo yoMhlaba futhi yilabo abahlala ezinhlangothini kuphela abangajabulela ugu nolwandle. Ukuthuthwa kwezilwandle bekungabiza kakhulu ukuthuthela maphakathi nezwe futhi kube nephesenti eliphakeme kakhulu labantu abangakwazi ukuhamba ogwini kalula kangaka.
Amazwekazi ayaqhela komunye nomunye futhi amanye ayahlangana akhe izinqwaba zomhlaba ezingakwazi bakha i-supercontinent. Isithombe sokugcina somhlaba onolwandle olugcwalisa ingxenye enkulu yohlangothi olulodwa, futhi izindawo zomhlaba zaqhutshelwa ndawonye zakha izwekazi elilodwa elikhudlwana.
Ukuze uyibone kangcono, kufanele ubuke ividiyo. Nakhu ukuthi iplanethi yethu izoba njani eminyakeni eyizigidi ezingama-250:
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Iyoba njani iplanethi yethu eminyakeni eyizigidi ezingama-250?